Xukun dil ah oo lagu riday saddex ka mid ah raggii loo heystay Kiiska Caasho Ilyaas Aadan | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Xukun dil ah oo lagu riday saddex ka mid ah raggii loo...
Muqdisho (SNTV):- Maxkamadda darajada 1-aad ee Gobolka Nugaal ayaa maanta ku dhawaaqday xukunka raggii ku eedeysnaa Kiiska Caasho Ilyaas Aadan oo dhowaan Kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Maxkamada Sheikh Cabdinuur oo ku dhawaaqay Xukunka ayaa sheegay in eedeysanayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige lagu xukumay dil toogasho ah oo ay fulineyso Maamulka Puntland.
Maxkamadda ayaa sidoo kale fasaxday toddobo nin oo kale oo kiiskaan ku eedeeysnaa, kuwaas oo ay dambi ku wayday,sidoo kale Guddoomiyaha Maxkamadda ayaa sheegay in eedeysanayaasha la xukumay ay heystaan bil racfaan haddii aysan ku qancin xukunka.
Dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkan ayaa meydkeeda laga helay magaalada Gaalkacyo ka dib markii laga afduubay halkaasi.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo Kiiska Caasho Ilyaas Aadan ka hadlay ayaa faray laamaha ammaanka iyo Garsoorkaba in cadaalada la marsiiyo raggii ka dambeeyay Kiiskaasi Foosha xun.
Previous articleTaliyaha ciidanka xoogga dalka oo kulan dhiira gelin ah la qaatay ciyaartooyda naadiga Horseed
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo dib uga soo laabtay Garowe